कोरोना म’हामारीबीच गङ्गा नदी किनारामा श’वको थुप्रो – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. कोरोना म’हामारीबीच गङ्गा नदी किनारामा श’वको थुप्रो – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
भारतको उत्तर प्रदेशका प्रहरीहरु अहिले गङ्गा नदीका किनारामा बालुवाले अलिअलि छोपछाप पारिएका श’वको अनुसन्धान गर्न खटिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण मृ’त्यु भएका व्यक्तिलाई गङ्गाका तटमा जथाभावी छाडिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरहरू पोस्ट भएपछि प्रहरीले अहिले सक्रियता बढाएको हो ।
जीप र डुङ्गाबाट गस्ती गरिरहेका प्रहरीले लाउड स्पिकरको सहायताले नदीमा जथाभावी श’व नफाल्न र नदी किनारामा अव्यवस्थित रुपमा श’व नछाड्न आम मानिसहरुलाई अनुरोध गर्न थालेका छन् । प्रहरीले लाउड स्पिकरबाट भनिरहेको थियो, “हामी तपाइँलाई अन्तिम संस्कारका लागि मद्दत गर्न यहाँ आएका हौं ।”
शुक्रबार, वर्षाले उत्तर प्रदेश राज्यको प्रयागराज शहरको गङ्गा नदी किनारमा बालुवाले छोपछाप पारेका श’व बेरिएका कपडा निकालिदिएको थियो ।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकारका प्रवक्ता नवनीत सेहगलले आइतबार स्थानीय सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचारको खण्डन गरेका थिए । समाचारमा कोभिड–१९ का कारण मृ’त्यु भएका एक हजारभन्दा बढी श’व विगत दुई सातामा गङ्गा नदी किनारामा बे’वारिसे अवस्थामा भेटिएको उल्लेख थियो । तर सेहगलले दाबीका साथ भने, “यी श’व कोभिड–१९ बाट पी’डित व्यक्तिका होइनन् ।”
उनले केही मानिसले हिन्दु परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने आफ्ना मृतक परिवारजनको दा’हसंस्कार यसपटक विभिन्न कारणले विधिपूर्वक नगरेको बताए । एकजना वरिष्ट प्रहरी अधिकृत के।पी। सिंहले कोभिड–१९ का कारण मृ’त्यु भएकाहरुको दा”हसंस्कारका लागि प्रयागराजको नदी किनारामा अलग्ग ठाउँको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कसैलाई पनि नदीको सामुन्ने दा’हसंस्कार गर्नबाट रोकिएको छ’ उनले भने ।
उनले प्रचार गरिएजस्तो नभई नदी किनारामा सानो संख्यामा श’व भेटिएका बताए, तर उनले वास्तविक संख्या दिन इन्कार गरे । दा’हसंस्कारका कार्यमा मद्दत गरिरहेको समाजसेवी संस्था बोन्धु महल समितिका सदस्य रमेशकुमार सिंहले ग्रामीण इलाकामा मृ’त्यु भएका व्यक्तिको संख्या निकै ठूलो रहेको बताए । उनले दा’हसंस्कारको काममा बढी खर्च र काठको अ’भावका कारण धेरै गरिब परिवारले आफ्ना आफन्तजनलाई नदी किनारामा त्यतिकै गा’डिदिने गरेको जानकारी दिए ।
हालका दिनहरुमा दा’हसंस्कारका लागि तीन गुणा मूल्य बढेको छ अर्थात् एक श’वको व्यवस्थापनका लागि भारु १५ हजारसम्म पर्न थालेको छ । राज्यका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले गत साता गङ्गा नदीले छेउ लगाएका ७१ श’व फेला पारेका थिए । अधिकारीहरुले ती श’वको पोस्टमार्टम गरेका थिए तर श’वहरु स’डिसकेकाले मृ’त्युको ठोस कारण ठ’म्याउन सकेका थिएनन् ।
उत्तर प्रदेशकै राजधानी लखनउबाट करिब ४० किलोमिटर दक्षिणको उन्नाउ जिल्लास्थित गङ्गा नदी तटमा बालुवाले छोपेको अवस्थामा गत साता एक दर्जन श’व फेला परेका थिए । जिल्ला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमारले मृ’त्युको कारण पहिल्याउन अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन् ।
भारतका दुई ठूला राज्यहरु उत्तर प्रदेश र बिहारमा झण्डै ३५ करोड ८० लाख मानिसको बसोबास छ । यी दुई राज्यहरु अहिले कोभिड–१९ बाट सर्वाधिक प्रभावित देखिएका छन् । तुलनात्मक रुपमा गरिब मानिएका यी दुई प्रदेशका मानिसले आफ्ना आफन्तको उपचारका लागि नजिकका शहर, बजारमा लैजाने गरेका छन् । तर धेरैको बाटोमै मृ’त्यु भइरहेका खबर निरन्तर आइरहेका छन् । एजेन्सी
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको May 17, 2021 May 17, 2021 101 Viewed